I-WOWOW Brushed Nickel ekhishini le-Sink Faucet Head
Ikhaya / izesekeli / Izesekeli zefenisi / WOWOW Brushed Nickel Ikhishi Sink Faucet Head
I-WOWOW Khipha Inhloko Yokukhipha Ikhanda Lompompi Wasekhishini, 3 Umsebenzi Wekhishi Lokucwilisa I-Faucet Replacement Head Part Pull Out Spray Head, I-Brush Nickel Kitchen Sink Faucet Head (H5009)
ISAZISO ngaphambi kokuthenga: Lokhu kufakwa kwekhanda kompompi wasekhishini KUPHELA kwesiXhumi se-G1 / 2 (MALE) (Cishe u-2 cm noma u-0.8 amayintshi), Hhayi i-NPT, Hhayi indawo yonke
IKHWALITHI EPHEZULU: Ikhanda lokufafaza ekhishini lenziwe ngepulasitiki lobunjiniyela (i-ABS) kanye ne-eerator ye-Neoperl eyakhiwe, ingasetshenziswa isikhathi eside ngesikhathi sokusetshenziswa kwansuku zonke, isiphetho se-nickel esishisiwe siyinhlangano yokulwa nokugqwala futhi akukho zimpawu zeminwe ezisele.
3 INDLELA YOKUSEBENZA: Amanzi okusakaza azinzile ahlinzeka ukugeleza okushelelayo nokuncane, akukho chaphaza; fafaza amanzi angahlanza imifino noma izithelo ngokugeleza okuncane, okungahambisani ne-splatter ngaphandle kokulimala; i-aqua blade water mode / sweep blade mode ingashanela amasinki akho kalula futhi ngokushesha ngamandla amakhulu.
I-Easy to Clean: I-aerator esezingeni eliphakeme ye-ABS ingavulwa kalula ngohlamvu lwemali, awekho amanzi anzima, nesikali, kugcina impilo nokusebenzisa okujwayelekile
Iwaranti, UKUSEKELWA KWAMAKHASIMENDE: Kunikezwa iwaranti yeminyaka emibili nokuxhaswa kwamakhasimende ngesikhathi esifanele. Imbozwe yimbuyiselo elinganiselwe yezinsuku ezingama-2